Kenya oo Gaadiid Iyo Askar Ku Weysay Weerar Ka Dhacay Gedo. – Shabakadda Amiirnuur
Kenya oo Gaadiid Iyo Askar Ku Weysay Weerar Ka Dhacay Gedo.
September 25, 2019 4:42 pm by admin Views: 102
Wuxuu ahaa weerar kamiin ah oo galabta ka dhacay meel u dhow degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo kaasoo askar ka tirsan Milatariga Xarakada Al-Shabaab ay ku wajaheen ciidamo ka tirsan kuwa Kenya oo socdaal ku jiray.
Askarta Kenyaanka ah ayaa markii hore ka baxay Ceelwaaq waxaana ay ujeedadoodu ahayd iney iska indha-indheeyaan ammaanka wadooyinka soo gala magaalada, waayo waxaa jirtay baqdin iyo tuhun ay ka qabeen suura galnimada weerar culus oo lagu soo qaado.
Sii socodkoodii hore waxaay kaxaysteen oo ciidanka dhanka hawada kala socday diyaarado nooca qumaatiga u kaca ah, mana jirin wax dagaallo ah oo ay la kulmeen. Balse markii ay dib usoo laabanayeen ayuu weerar kamiin ahi ku qabsaday meel u dhow Ceelwaaq oo la yiraahdo SAN-DACAAR.
Kenyaanka ayaa wuxuu weerarku qabsaday xilli aaney filanayn islamarkaana ay is lahaayeen halkan waa wadadii aad soo marteen, waana idiin amni. Kamiinka ayaa ku billowday hub culus iyo mid fudud, natiijaduna waxay noqotay in askarta Kenya laga gubo hal gaari oo nooca ciidamada Xambaara ah.
Gaarigan ayaa waxaa helay hub culus oo aanan illaa iyo hadda noociisa ogaan, intiisa badanna wuu burburay, Sidoo kale askartii saarnayd gaariga ayaa dhimasho iyo dhaawac noqotay. Ciidamada Kenya ee kusoo duulay Soomaaliya ayaa wajahaya khasaare culus oo joogto ah. Warbixin dhawaan la shaaciyay ayaa sheegtay 800 oo ciidankooda ah iney ku waasheen dagaalada Soomaaliya.